I-Aeromexico ifinyelela esivumelwaneni nezinyunyana
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Aeromexico ifinyelela esivumelwaneni nezinyunyana
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • IMexico Breaking News • Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Izivumelwano zibalulekile ukubhekana nemithelela emibi ebangelwe umhlaba wonke embonini yezindiza ubhadane lwe-COVID-19 futhi zizokwenziwa ngokusemthethweni ezinsukwini ezilandelayo
I-Grupo Aeroméxico, i-SAB de CV imemezela ukuthi isifinyelele ezivumelwaneni ezigculisayo ne-Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) kanye ne-Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), ngesikhathi kuhlelwa kabusha Izivumelwano Zabo Zokubonisana. Izivumelwano, ezivunyelwe izolo ngevoti lomuntu siqu kanye neqondile labashayeli bezindiza beNkampani kanye nabagibeli bezindiza, zibalulekile ukubhekana nemiphumela emibi edalwe umhlaba wonke embonini yezindiza yi Covid-19 ubhadane futhi kuzokwenziwa ngokusemthethweni ezinsukwini ezilandelayo.
Imiphumela etholakele ngesikhathi sezingxoxo ibidingeka ukuze iNkampani ihlangabezane nokuzibophezela kanye nezinhloso ezithile ezidingeka kubabolekisi be-DIP ngaphansi kwe-Senior Debtor ku-Possession Credit Facility, etholwe ngaphakathi kwenqubo yeNkampani yokwakhiwa kabusha kwezezimali.
INkampani iyawubona umzamo obalulekile owenziwe yizisebenzi zezindiza ze-ASSA kanye nabashayeli bezindiza be-ASPA ukubhekana nemiphumela emibi yalolu bhubhane futhi izoqhubeka nokusebenza ngendlela ehambisanayo nabamele izinyunyana ukwenza izivumelwano ezifinyelelwe zibe semthethweni.
Aeromexico futhi iyakwazisa ukusekelwa kwabasebenzi bayo ababumbene beSindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) kanye neSindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Ezokuthutha, iServicios, Simila Independencia), lapho iNkampani yafinyelela naye ezivumelwaneni ezigculisayo ngoDisemba odlule, okwakhulunywa ngazo phambilini. Ngokunjalo, iNkampani igqamisa imizamo yabasebenzi abangahlangene, kanye noHulumeni waseMexico wokuhamba nenkampani yezindiza kuyo yonke le nqubo.
Inkampani izoqhubeka nokusebenza ezinsukwini ezilandelayo ohlelweni lokuhambisana nemibandela nezibopho ezisungulwe Esivumelwaneni Sezikweletu, ukuze icele ukukhokhelwa okulandelayo ngaphansi kweTranche 2 yeMali Yezimali ye-DIP.
I-Aeromexico izoqhubeka nokulandela, ngendlela ehlelekile, inqubo yokuzithandela yokuhlelwa kabusha kwayo kwezezimali ngaphansi kwenqubo yeSahluko 11, ngenkathi iqhubeka nokusebenza futhi inikezela ngezinsizakalo kumakhasimende ayo futhi inikezela kubathengi bayo izimpahla nezinsizakalo ezidingekayo ukuze zisebenze. INkampani izoqhubeka nokuqinisa isimo sayo sezezimali kanye nokuthengiswa kwempahla, ivikele futhi igcine ukusebenza nempahla, futhi isebenzise ukulungiswa okudingekayo ukubhekana nomthelela othathwe ku-COVID-19.